Fomo: mampitombo ny fiovam-po amin'ny alàlan'ny porofo ara-tsosialy | Martech Zone
Talata, Jona 19, 2018 Alatsinainy, Novambra 22, 2021 Douglas Karr
Izay miasa amin'ny sehatry ny ecommerce dia hilaza aminao fa ny antony lehibe indrindra handresena ny fividianana dia tsy ny vidiny, ny fitokisana. Ny fividianana avy amin'ny tranokala fiantsenana vaovao dia mitaky fisondrotan'ny finoana avy amin'ny mpanjifa izay tsy mbola nividy tamin'ny tranokala teo aloha.
Famantarana fahatokisana toy ny SSL lava, fanaraha-maso ny fiarovana ny antoko fahatelo, ary ny naoty ary ny fijerena dia manakiana avokoa amin'ny tranokalan'ny varotra satria manome ny mpivarotra azy ireo hiasa amin'ny orinasa tsara izay hanatanteraka ny toky nomeny. Mbola betsaka noho izany ny azonao atao!
Fomo dia mitovy amin'ny Internet amin'ny fivarotana antsinjarany be olona, ​​manome porofo ara-tsosialy ho an'izay rehetra mitsidika ny tranokalanao. Ity porofo ara-tsosialy ity dia matetika mety hampiroborobo ny fiovam-po amin'ny 40 ka hatramin'ny 200%, izay mpanakalo lalao ho an'ny fivarotana an-tserasera rehetra. Ity misy pikantsary ny fampisehoana Fomo amin'ny fivarotana mavitrika:
Amin'ny fampisehoana ny varotra rehefa mitranga eo amin'ny tranokalanao izy ireo dia manana tombony telo noho ny mpifaninana aminao:
Mamorona fahatsapana fahamehana - Mampiseho baiko i Fomo rehefa mitranga izany, mahatonga ny fivarotanao ho tontolo iainana mahaliana ary mitaona ny hetsiky ny mpividy.
Mahatsiaro ho anisan'ny vahoaka ny mpanjifa - Ny fampisehoana Fomo dia toy ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fotoana maharitra ho an'ny fivarotanao - ny fahitana ny fividianana hafa dia miteraka fahatokisana eo noho eo.
Porofo ara-tsosialy + azo itokisana - Ireo mpanjifa mety hahita ny fividianana ataon'ny hafa - manome fahatokisana ny fivarotanao sy ny fananganana fahatokisana amin'ny mpampiasa.
Fomo dia tafiditra ao amin'ny 3Dcart, Active Campaign, Aweber, BigCommerce, Calendly, Celery, ClickBank, ClickFunnels, Cliniko, ConvertKit, Cratejoy, Delighted, Drip, Ecwid, Eventbrite, Facebook, Gatsby, Get Response, Google Review, Gumroad, Hubspot, Infusionsoft, Instagram, Instapage, Intercom, Judgeme, Tsara fanahy, Leadpages, Magento, Mailchimp, Neto, Privy, ReferralCandy, Selz, SendOwl, Tadin-kiraro, Shopify, Mpivarotra ankatoavina, Squarespace, Voatomboka, Stripe, Azo ampianarina, ThriveCart, Trustpilot, Typeform, Unbounce, Universe, ViralSweep, Wix, Woo Commerce, WordPress, Yotpo, Zapier, Zaxaa, ary manana API izy ireo.
Azonao atao ny mandinika ny fiantraikan'ny hafatra Fomo amin'ny varotrao. Mpampiasa iray an'i Fomo no nizara fa tao anatin'ny iray volana dia nahita fifanakalozana 16 nifandraisany mivantana tamin'ilay rindrambaiko manana habe amin'ny filaharana mihoatra ny salan'isa izy, ary nahatratra $ 1,500 ny fidiram-bola fanampiny. Tombony lehibe azo amin'ny tamberim-bola ho an'ny fitaovana iray izay $ 29 isam-bolana ny vidiny!
Atombohy anio ny fitsapana fomo maimaim-poana!
Tags: 3dcartFanentanana mavitrikaAWeberBigCommercekalandrieSeleriaclickbankClickFunnelsClinicoConvertKitcratejoyfitokisanaFinaritraMiteteporofo ara-tsosialy ecommerceEcwideventbriteFacebookgatsbyMitadiava valinygoogle hevitraGumroadhubspotmitombo ny fiovam-poInfusionsoftInstagramInstapagetelefaoninaFitsaranaTsara fanahyLeadPagesmagentomailchimpNetohampandrenahalalareferralcandyselzSendOwlShoelaceshopifymiantsena add-onsfivarotana pluginsfitaovana fivarotanaMpividy no nankatoavinaporofo ara-tsosialysquarespacetsy laninymivatramora ampianarinaThriveCartmari-pamantarana fitokisanatrustpilotkarazana endrikaunbounceizao rehetra izaoViralSweepWixvarotra wooWordPressYotpozapierZaxaa
Manomboka amin'ny pejy fandraharahana Facebook sy Marketing amin'ny Facebook